कति छ विप्लवसँग हतियार?
दिमागमा बन्दुक भएपछि हतियारको खाँचो हुँदैन : विप्लव
नारायण अधिकारी | २०७५ फागुन ३० बिहीबार | Thursday, March 14, 2019 १६:१९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं– ‘विप्लवले बन्दुक कति लुकाएको छ भन्ने गरिन्छ। यो कुरा गर्दाखेरी प्रचण्डजीलाई सोध्नुपर्छ। प्रचण्डजीले सबै बन्दुक हामीले बुझाइसक्यौ भन्नुभा'छ। त्यसकारण यो प्रश्न मलाई सोध्नुभएन। तर बन्दुक कति छ? छ/छैन? भन्दा मैले भन्ने गरेको छु, यहाँ (टाउकोतिर हातले देखाउँदै) बन्दुक भयो भने जतिखेर पनि आइपुग्छ। मान्छेको दिमागमा बन्दुक छ भने जतिखेर पनि आइपुग्छ। अहिलेको विश्वमा बन्दुक अभावको महसुस नगर्नुस्।’
२०७१ मंसिरमा मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको माओवादीबाट नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूह अलग भएपछि पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एक केन्द्रीय सदस्यले 'युद्ध त लड्ने तर हामीसँग हतियार चाहिँ कति छ?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा विप्लवले दिएको उत्तर थियो त्यो।
'यसमा सबै हुन्छ। एउटा गाउँमा मात्रै लड्ने काठमाडौंमा नलड्ने भन्ने हुँदैन। काठमाडौंमा मात्रै लड्ने गाउँमा नलड्ने, त्यसो हुँदैन। अहिले गाउँको जनतामात्रै पीडित छैनन्। आजको जो संसदवादी दलहरुले गरिरहेका निर्णयहरु, विदेशीका इसारामा भएका हर्कतहरु त्यसको मारामा सहरका मानिस पनि छन्। त्यसको मारमा किसानमात्रै होइन। बुद्धिजीवी र मध्यम वर्ग पनि छ। मलाई लाग्छ त्यसको मारमा राष्ट्रवादीहरु पनि छन् र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि छ। यी सबैलाई एकताबद्ध गरेर लड्नु आजको संघर्षको स्वरुप हो। त्यसकारण सबैतिरबाट एकैपटक लड्नुपर्छ। गाउँ र सहर भन्ने हुँदैन।' विप्लवले जवाफमा भनेका थिए।
त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीमा विप्लवले दिएका यी जवाफ अहिले मिल्दै गएको देखिन्छ। प्रहरीले पछिल्लो समय विप्लव समूहबाट फुत्तफुत्त अत्याधुनिक हतियार, म्याग्जिन, गोली बरामद गर्नु र विप्लवले हतियारको अभाव नहुने बताउनु संयोग मात्रै हो वा वास्तविकता? त्यो पुष्टि हुँदै जाला। सरकारले विप्लव समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपछि त्यसको जवाफ समेत विप्लवले दिइसकेका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले 'मुखतोड जवाफका लागि पूर्ण रुपले तयार भइसकेको' बताएका छन्। यसले विप्लव पार्टी हतियार सुसज्जित बन्दै गएको हो त भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ। अझ विगतमा हतियार बरामद भएका केही घटनालाई हेर्ने हो भने झनै शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ।
यी सबैलाई एकताबद्ध गरेर लड्नु आजको संघर्षको स्वरुप हो। त्यसकारण सबैतिरबाट एकैपटक लड्नुपर्छ। गाउँ र सहर भन्ने हुँदैन।' विप्लवले जवाफमा भनेका थिए।
उनीहरुसँग भएका यी हतियारमध्ये थोरै संख्यामा मात्रै काम लाग्ने ती अधिकृतले बताए। ‘हतियारलाई हरेक हप्ता सफा गर्दै तेल लगाएर टल्काएर राख्नुपर्छ। खिया लागेपछि हतियारले काम गर्दैन,' उनले भने, 'उनीहरुले सुरक्षा निकायबाट बच्न खाल्डो खनेर अर्थात् कतै लुकाएर राखेका होलन्। यति लामो समयसम्म त्यसरी राखिएका हतियारमा खिया लागिसक्छ।’
यो पनि : विप्लव समूहबाट बरामद हतियार कति खतरनाक?